APIE ၏အပိုင်းအစ - ဇန်နဝါရီလ 2019 သတင်းလွှာ - Austin Partners in Education
ဇန်နဝါရီ 15, 2019
စေတနာ့ဝန်ထမ်းပြန်လာပါ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ရလဒ်များကိုမျှဝေခြင်း၊ APIE ကိုထောက်ခံသူများစွာကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်နှစ်သစ်ကူးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပသောနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုစတင်ခြင်း။
လူငယ်များသည်၎င်းတို့၏မိသားစုများပြင်ပရှိလူငယ်များကိုလမ်းညွှန်ပေးရန်အမေရိကန်၊ လူမျိုးရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်အခြားတံတားများကိုဖြတ်ကျော်။ သွားလာနေကြသည်။ National Mentoring Partnership မှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအမေရိကန်လူငယ်တစ် ဦး လျှင်သုံး ဦး သည်လက်တွေ့ဘ ၀ လမ်းညွှန်များပေးရန်လမ်းညွှန်ပေးစရာမလိုဘဲကြီးထွားလာနေပြီးကျောင်းနှင့်အလုပ်မှအဆက်ပြတ်သွားနိုင်သည်။
ဆရာတစ် ဦး နှင့်အတူကလေးတစ်ယောက်သည်
78% သည် ၄ င်းတို့၏ရပ်ရွာများ၌ပုံမှန်လုပ်အားပေးရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်
နွေ ဦး ရာသီစာသင်ချိန်ကစပြီး၊ စာသင်ခန်းများ၌ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်လူကြီးများကိုဂရုစိုက်ရန်ရှာနေသည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ အလုပ်ဖော်များ၊ အိမ်နီးချင်းများထံသင်“ ကျောင်းသားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုကြိုက်လား? သင်ယူသူလူငယ်တစ် ဦး ၏ပညာရေးကိုကြွယ်ဝစေရန်တစ်ပတ်လျှင်တစ်နာရီပေးနိုင်ပါသလား။ ” သူတို့ကို APIE နဲ့ဆက်သွယ်စေချင်တယ်။ ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ မှတ်ပုံတင်ရန်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းမီးမောင်းထိုးပြ | Rick Schumacher
Rick Schumacher, APIE ဆရာ
Rick Schumacher သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ APIE ၏လမ်းညွှန်ဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ် ဦး အနေဖြင့် Rick သည် APIE နှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ခြင်းသည်ရပ်ရွာလူထုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်တူညီကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Tillman ပညာရှင်ပါ။ Tillman ဖောင်ဒေးရှင်းမှစစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်များအားပညာသင်ဆုများပေးအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းညွှန်သင်ကြားမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ရပ်ရွာလူထုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်တူသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်ကလေးဘဝတုန်းကဆရာရှိရန်လုံလောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ငါရှိရာအရပ်အပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ငွေပေးချေချင်ပါတယ်
သင်၏ mentee နှင့်အတူဘာလှုပ်ရှားမှုများလုပ်သနည်း
အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့လည်စာစားကြပြီးကျောင်း၊ ဘဝနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ ငါတို့လည်းဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းကစားချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ထူးခြားသောအနေအထားတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် mentees နှစ် ဦး၊ ဒုတိယတန်း၌တစ်ယောက်နှင့် ၇ တန်းတွင်တစ်ယောက်ရှိသည်။ ဒါဟာနှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာသူငယ်တန်းကတည်းကကတည်းကသတ္တမတန်းကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျနော်တို့ကရိုးရှင်းတဲ့ကစားစရာတွေနဲ့ကစားခဲ့တယ်။ အခုငါတို့စစ်တုရင်ကစားနေတယ်။ သူ့ကိုနှစ်တွေတစ်လျှောက်တိုးတက်လာတာကိုမြင်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်ကိုင်တွယ်ရန်မလွယ်ကူသည့်ကိစ္စများပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။ အိမ်တွင်းအခြေအနေသို့မဟုတ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရတာဝမ်းသာပါတယ်။ တိုင်ပင်မှူးမတ်များနှင့်ဆရာများအမြဲတမ်းရရှိနိုင်ပါပြီ
သင့်ရဲ့ mentee နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုမျှဝေခဲ့သည့်“ အောင်မြင်မှု” အခိုက်အတန့်သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသင်၌ရှိပါသလား။
သင်လမ်းညွှန်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်သင်သွားသောအခါ၊ များသောအားဖြင့်ကျောင်းတွင် mentee၊ အိမ်ဘဝသို့မဟုတ်အထူးစိုးရိမ်စရာများကိုနောက်ခံထားလေ့ရှိသည်။ ငါနှစ်နှစ် mentee တစ်ခုရှိခဲ့သူသည်မိမိနောက်ခံအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အခါဒုတိယနှစ်တွင်မှတဆင့်ဝက်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုဖူးသမျှအခြားစကားများနည်းတူလွယ်ကူပြီးမဆိုင်းမတွဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းပျော်မိလို့ဒီကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပြီးသူမသုံးဘဲစစ်ထုတ်မဲ့သူနဲ့စကားပြောနိုင်သူဖြစ်လာနိုင်ခဲ့တယ်။
သူတို့ရှိရာကလေးတွေတွေ့ဆုံပါ။ မင်းရဲ့အတွင်းစိတ် ၈ နှစ်အရွယ်ကိုအသာပုတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ mentee နှင့်အတူရည်မှန်းချက်များထားပါ။ A ရဲ့လား၊ နေ့လည်စာစားရန်လူရွှင်တော်ဆံပင်ကိုဝတ်ဆင်ပါ။ ဖန်တီးမှုရယူပါ။
အစီအစဉ်ရလဒ်များ နှစ်ပတ်လည်အကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာ 2017-2018
ရလာဒ်များမှာသင်ကွဲပြားမှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ရပ်ရွာနှင့်စာသင်ခန်းကိုချိတ်ဆက်ရန် APIE ၏အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများသည်ကျောင်းသားများ၏မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးပွားစေပြီးသူတို့၏စာမေးပွဲအမှတ်များကိုလည်းတိုးတက်စေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။
အလယ်တန်းကျောင်း ၇ ခုမှအ္ဌမတန်းကျောင်းသားများသည်အထက်တန်းကျောင်းရှိအက္ခရာသင်္ချာ I အတွက်ပြင်ဆင်ရန် APIE ၏သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြသင်တန်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြင်းထန်ဆုံးရလဒ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဟစ်စပန်းနစ်ကျောင်းသားများနှင့်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ချာပရိုဂရမ်၏ ၇၆၁TP1T ကိုဖွဲ့စည်းပြီး STAAR သင်္ချာစံသတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်ဖက်သည့်သက်တူရွယ်တူများထက်ပိုမိုမြင့်မားစွာရရှိခဲ့သည်။ APIE သင်တန်းသားများသည်သင်္ချာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလုပ်အကိုင်များကိုပိုမိုသိရှိနားလည်လာကြသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် AISD အထက်တန်းကျောင်း ၁၀ ခုမှသက်ကြီးရွယ်အို ၄၈၇ ယောက်တို့သည် APIE ၏ကောလိပ်အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ APIE CR ပရိုဂရမ်ပါ ၀ င်သူများ၏နှိုင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်ထားသောအဖွဲ့များထက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားသောရာခိုင်နှုန်းသည်ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်စာမေးပွဲများ (ဥပမာ ACT, SAT နှင့် TSI) နှင့်ကောလိပ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီးကောလိပ် ၀ င်ခွင့်နှင့်ဘဏ္aidာရေးအထောက်အပံ့များကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်
အလှူရှင် Spotlight | ပတ်တီ Steinwedell
ပတ်တီ Steinwedell, APIE Supporter
Patti သည် Texas ရှိ Teacher Retirement System (TRS) တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ APIE သည်အလှူရှင်ဖြစ်ပြီးအလယ်တန်းကျောင်းသင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြသင်တန်းတွင်နှစ်နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူမက APIE စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်သူမ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုသူမ၏အားအနည်းငယ်မေးမြန်းခဲ့သည်။
ရပ်ကွက်ထဲမှာဘာကြောင့်ပါ ၀ င်ရတာလဲ။
နေရာတစ်ခုတွင်အိမ်၌နေနိုင်ရန်အတွက်အလှူငွေထည့်ရန်အရေးကြီးသည်။ ပံ့ပိုးမှုများတွင်အချိန်၊ စွမ်းရည်နှင့်အရင်းအမြစ်များပါဝင်သည်။ ရပ်ရွာထဲတွင်ပါ ၀ င်မှုကကျွန်ုပ်အားအသစ်သောအရာများကိုသင်ယူရန်၊ ကျွန်ုပ်သိရှိထားသည့်အရာအချို့ကိုမျှဝေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်နေထိုင်သောနေရာတွင်အခြေအမြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအတူတကွချည်နှောင်စေပြီးနေရာတစ်ခုကိုအိမ်လိုခံစားစေသည့်ဘုံသမိုင်းကိုဖန်တီးပေးသည်။
Austin Partners in Education နှင့်အတူလုပ်အားပေးရန်အဘယ်အရာကသင့်အားလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဘယ်အရာကိုသင်အကြိုက်ဆုံးရှိသနည်း။
ငါ Texas မှာရှိတဲ့ Teacher Retirement System မှာအလုပ်လုပ်တယ်။ သူတို့က TRS ၀ န်ထမ်းတွေကို APIE နဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့အချိန်ပေးတယ်။ ဒါဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူရန်လွယ်ကူသောဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ! APIE နှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်းခြင်းသည် TRS ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုပြန်လည်ပေးအပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ငါဟာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးအတွက်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကြောင့်၊ အိမ်မှာအမေနေဖို့နဲ့ဘဏ္inာရေးမှာသင်္ချာဆိုင်ရာခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်လိုအပ်ခဲ့လို့သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ခိုင်မာသောသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုမရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ဤမည်သည့်အလုပ်မျိုးတွင်မဆိုအောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုပထမဆုံးပြောခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်လုံးဝယုံကြည်ပါသည်။ အာမခံချက်ဖြင့်ပြန်လည်ရရှိသောတစ်ခုတည်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာပညာရေးဖြစ်သည်။
ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အုပ်စုတစ်စုတွင်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ပျော်စရာကောင်းသောကျောင်းသားလေးယောက်ပါ ၀ င်သည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏သင်္ချာကိုအာရုံစိုက်ရန်မှာ ဦး စားပေးကိစ္စမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုသင်္ချာသည်ဖုန်းများ၊ စက္ကူဘောလုံးများ၊ အားကစားနှင့်လူမှုရေးစကားဝိုင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းအထူးသဖြင့် ၈ နှစ်အတွက်ဖြစ်သည်th ကျောင်းသားများ။ တစ်ခါတလေသင်ခန်းစာတစ်ခုခုထဲနစ်နေပြီလားလို့ကျွန်တော်တစ်ခါတလေစဉ်းစားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပါတဲ့သူတွေဆီကလက်လုပ်ကတ်ကိုငါရတယ်၊ သူတို့ဟာငါထက်ပိုပြီးနားထောင်နေတာကိုသက်သေပြခဲ့တယ်။ Shakira ၏ကဒ်သည်အလွန်ရိုးသား။ “ ငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပြီးကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ကများသောအားဖြင့်အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ကစားနေပေမဲ့မင်းကိုငါနဲ့မကပ်ဘဲထားခဲ့တာကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်။
Austin မာရသွန် | ဆမ် & ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Dowd
အဆိုပါ 2019 Austin မာရသွန်လျင်မြန်စွာချဉ်းကပ်! ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင်အပြေးသမားများကသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ရန်ပုံငွေရှာနေစဉ်မာရသွန်၊ မာရသွန်ဝက်နှင့် 5K တို့တွင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပြိုင်ပွဲအတွင်းတွင် Sam နှင့် Grace Dowd တို့သည် Austin Partners in Education အတွက်ပညာရေးအတွက် ၁TP2T6,000 ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်တစ် ဦး အတွင်းပိုင်းကြည့်ပါ!
Sam & Grace Dowd၊ Austin မာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင်များနှင့် APIE ထောက်ခံသူများ
“ အလှူငွေတောင်းခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့အရင်ကစိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်စာအတူတူရေးပြီးပို့လိုက်တော့မယုံနိုင်လောက်အောင်တုံ့ပြန်မှုရတယ်။ Austin တွင်အထောက်အကူပြုရန်အဖွဲ့အစည်းကြီးများကိုရှာဖွေနေသူများစွာမှာများသောအားဖြင့် APIE ၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့်အတိုင်းအတာကိုလူတို့အား ပိုမို၍ ပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာသည်။ APIE အတွက်ခက်ခဲစွာလုပ်ဆောင်ရန်လှူဒါန်းမှုများသွန်းလောင်းခြင်းကကြီးမားသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်တဖန်စတင်ရန်မစောင့်နိုင်ပါ။ "
APIE သည်မိုင် ၂၂ ကိုရေပြန်လာပြီးရူ့ရန်အားပေးလိမ့်မည် Austin မာရသွန် ပြေး! စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းသည်ဤမြို့အနှံ့အပြားတွင်ပြုလုပ်သောအခမ်းအနားတွင်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာတွင်ပါဝင်ရန်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့လည် ၇ နာရီခွဲမှ ၁၁း၀၀ နာရီနှင့် ၁၀ နာရီ ၃၀ မှ ၂း၀၀ နာရီအဆိုင်း ၂ ခုကိုပြုလုပ်သည်။ စာရင်းသွင်းရန် ကျေးဇူးပြု၍ Andrea Panter - apanter@austinpartners.org ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ပြိုင်ပွဲနေ့၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်!
နောက်တစ်ခုမတ်လနွေ ဦး နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနောက်တစ်ခု